Madaxweynaha Somaliland oo Gacantiisa Ku Qaybiyey In Ka Badan Hal Milyan oo Buug – WARSOOR
HargeysA – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa gacantiisa ku qaybiyey Buugaagta manhajka waxbarashada Somaliland ee dugsiyada Hoose dhexe oo lacag la’aan ah, kuwaas oo uu maanta si rasmi ah ugu qaybiyey ardayda wax ka barata dugsiga Qudhac-dheer ee degmada Maxamuud Haybe ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Madaxweynaha oo ay wehelinayaan masuuliyiinta ugu sarraysa wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska, ayaa saaka qaybinta Buugaagta daabacan ee Manhajka waxbarashada dugsiyada Hoose dhexe ee dalka oo tiradoodu dhan tahay 1,000,200 (Hal Milyan iyo Laba boqol), isla markaana ay ka faa’iidaysan doonaa arday tiradoodu dhan tahay 153,077 (Boqol iyo Saddex iyo konton kun iyo Toddoba iyo Toddobaatan) Arday, waxa uu ka bilaabay dugsiga Hoose dhexe ee Qudhac-dheer ee Degmada Maxamuud Haybe.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland,Mudane Muuse Biixi Cabdi oo hadal u jeediyey ardayda wax ka barata dugsiga Hoose dhexe ee Qudhac-dheer iyo macallimiintooda, ayaa ardayda ku bogaadiyey inay ku dedaalaan waxbarashadooda, isla markaana ay dhexda u xidhaan sidii ugu diyaar garoobi lahaayeen hoggaaminta dalkooda.
Madaxweynuhu waxa uu hoosta ka xarriiqay sida ay xukuumadda uu gadh-wadeenka ka yahay ay uga go’an tahay inay daryeesho da’yarta wax baranaysa ee mustaqbalkooda la dhisayo, maadaama ay aayihii dambe uu dalka yihiin, “Mar haddii aad mustaqbalka leedihiin xaq waxad u leedihiin in la idin siiyo tacliin wanaagsan iyo nolol wanaagsan, waajib bayna ku tahay waalidka, dawladda iyo tujaartaba inay idinka idin daryeelaan, waayo mustaqbalka dalku waa dadka. Daar la dhiso iyo laamiyada iyo qurux la beero waxa ugu weyn ee la maalgelinayaa waa mustaqbalka iyo da’yarta iyo dadka, waxana aannu doonaynaa in da’diinani aad ka duwanaataan da’da maanta nool dhinac walba,” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Wasiir Sheegay In Hay’adaha Dawladdu 70% Isticmaalan Astaanta Qaranka Oo Khaldan Iyo Qaabka Ay Sax ku Tahay